မင်းသိင်္ခ ဗေဒင် - Min Thein Kha Baydin - Apps on Google Play
Bagan Innovation TechnologyLifestyle
No. 601, 5th Floor, Building No. 9, Myanmar Info-Tech, Hlaing University Campus, Hlaing Tsp. Yangon
သမ္ဗု​ဒ္ဓေ ဂါထာတော် (၅) မျိုး ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်
ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း ပါဠိတော် နှင့် အသံထွက်
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် အသံဖိုင်နှင့် ပါဠိတော်
Best Myanmar Keyboard, Myanmar Unicode Keyboard, Zawgyi Keyboard
ရွှေနားဆင် အသံသွင်းစာအုပ်စင်တွင် မြန်မာအသံသွင်း စာအုပ်များကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
မြန်မာဘာသာပြန် ကိုရီးယား၊ ဂျပန်ကာတွန်းစာအုပ်များ ဖတ်နိုင်မည့် Wun Zinn Comic App
ပူပူလေး - Pu Pu Lay (Bagan Game)
မြန်မာမုန့်ပူပူလေးတွေနဲ့ ပူပူလေးမြန်မာဂိမ်း! Let's play Pu Pu Lay Myanmar Game!